u Tjidzani le Imvuselelo yamakholwa bekiyani i Show ngelanga elilodwa -
u Tjidzani le Imvuselelo yamakholwa bekiyani i Show ngelanga elilodwa
Kunhlobo nhlobo zonke zomculo akukho engakutshiya ubambe umlomo wangaphansi njenge Gospel ye Matebeland , ikakhulu abahlalela e Goli.
Lokhu i Music Giya ikuqapheliswe yisenzo se Imvuselelo yamaKholwa lo Tjidzani abaqondanise i Show yabo yaba ngelanga elilodwa yaphinda yaba sendaweni eyodwa. Ama Show lawa amhlaka 3 August 2019 endaweni yase Hillbrow , ahlukane ngentengo yokungena lapho eye Imvuselelo yamakholwa iyi R50 kukanti eka Tjidzani ithe qhuzu kancane yabiza R100.
I Gospel ye Matebeland idume ngokungabi labantu abangaki abangenayo kuma Shows iloba wenze kwaba yimalini ukungena. Sihlala sibona abantu abangadluli i 30 emcimbini ye Gospel siyamangala ama sebesuke baqondanisa ukuthi kozala nkomoni. Esinye isimanga yikuthi amaqembu abonakala ku Post ye Imvuselelo yamakholwa ayabonakala laku list yamaqembu azanandisa ku Tjidzani.
I Music Giya iqaphe ngeso lokhozi ukuthi izabe ikhona ku mcimbi yonke yomibili isiyazibonela ukuthi lizoma njani leli salamusi elenziwe ngabaculi bozokholo.
U Tjidzani ngumhlabeleli oselemyaka embalwa esendimeni yomculo kodwa kakabi lawo amacwecwe amanengi , useke wabonakala kumabonakude e Zimbabwe lasemsakazweni ehambisa umculo wakhe.
Imvuselelo yamakholwa yaduma kakhulu ngengoma ethi Bahlupha umoya wami yahle yahlala phezulu kungalane yabaculi be Zimbabwe abahlalela eGoli , ithandiwa kakhulu iGoli yonke lase Zimbabwe imbala , injalo yadunyiswa ngo malayitsha kakhulu ngoba bazidlala kakhulu ingoma zayo masebesidla amahabula.